सागकी स्वर्ण विजेता धामीलाई गृहनगरमा भव्य स्वागत (तस्बिरसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
महेन्द्रनगरः हालै सम्पन्न १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा कुस्ती खेलमा स्वर्ण पदक जितेकी संगिता धामीलाई गृह नगरमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ३ की १९ वर्षिया धामीले जनकपुरमा सम्पन्न ५५ किलो तौल समूहमा नेपालका लागि स्वर्ण जितेकी थिइन् ।
नेपाली कुस्ती खेलको इतिहासमै पहिलो पटक स्वर्ण जितेकी धामीले बङ्गलादेशका सखिरा सरकाररिनेलाई फाइनलमा पराजित गरेकी थिइन् । भीनपा वडा कार्यालयले आइतबार धामीको स्वागत र सम्मानमा महेन्द्रनगर बजारमा विजय र्याली निकालेको छ । बजार परिक्रमापछि र्‍याली वडा कार्यालय पुगेर समापन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बक्सिङ नेपाललाई स्वर्ण दिलाएका सनिल शाही सम्मानित
वडा कार्यालयमा गरिएको समापन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष रामबहादुर जप्रेलले धामीलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गरे । कार्यक्रममा वडा कार्यालयले धामीलाई नगद २५ हजार ५ सय २५ रुपैँया नगद समेत प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर अमर सिह धामीले पदक विजेता धामीलाई एक लाख ५ हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरे ।
याे पनि पढ्नुस पौडीमा गौरिकाले जितिन् रजत
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष जप्रेल सहित वडा नं. ७ का अध्यक्ष शंंकर कुँवर, धामीकी आमा धनादेबी धामीसहित स्थानीय, खेलाडी, जनप्रतिनिधि, प्रशिक्षक र्यालीमा सहभागी भएका थिए । वडा अध्यक्ष जप्रेल सहितले धामीलाई टिका र खादा लगाएर सम्मान गरेका थिए ।
वडा अध्यक्ष धामीले जप्रेलले सागमा स्वर्ण जितेर भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुर जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशको मान प्रतिष्ठा बढाएको बताए । ‘संगिताको जीत हाम्रो वडाको पनि जित हो,’ वडा अध्यक्ष राम बहादुर जप्रेलले भने, ‘यो सारा नेपालीको जीत हो ।’
ट्याग्स: १३ औं साग, संगिता धामी, स्वर्ण पदक